> Resource > Lugood > Sida loo Beddelaan Rhapsody in Lugood
Ma suurtagal ii tahay inay u hagaagsan music ka Rhapsody la Lugood si aan u raaxaysan karaan music ka soo bixi on my iPod? Waxaan iibsaday Times ah in Rhapsody si looga fogaado degsado music sharci darro ah iyo hadda in aan bixinta music ah, waxaan jeclaan lahaa inaan si weyn uga faaiidaysato waxaa ka mid ah. -Aaron Warnick
Ka dib markii aad ka Rhapsody download music, aad Rhapsody bedeli karaa Lugood oo waxaad kor saartaa iPod? Dad badan ayaa igu su'aashan weydiiso. My jawaabta waa haa. Heeso Rhapsody Qaar ka mid ah sida caadiga ah la soo gelin karo Lugood haddii aad u hesho in MP3 files ka dib markii iibsaday. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursad aad ku guul dareysato in ay dajiyaan doonaa faylasha qaar Rhapsody.
Ha welwelin. Waxaad isticmaali kartaa Streaming Audio Recorder . Waa Converter ah oo dhan-in-mid Rhapsody in Lugood, caawinaya in aad si sharci ah ka saar wixii xannibaad ku music Rhapsody oo isku mar Rhapsody wareejiyo Lugood effortlessly. Waxaan kuu sharxi doonaa hanaanka hoose.
1 Ku rakib Rhapsody si Converter Lugood
Download iyo rakibi this smart app. App Tani weyn waxaa laga heli karaa halkan.
2 Download Rhapsody in Lugood
Orod Rhapsody si Converter Lugood in ay galaan ay interface ugu weyn. Markaasuu ku dhacay "Record" badhanka dhinaca kore ee bidix. Markaas ciyaaro mid ka mid Rhapsody song aad rabto in lagu wareejiyo. Hadda, taas smart app waxaa lagu qoro heesta. Marka song ay ka badan tahay, duubista ka joojin doonto mar.
Fiiro gaar ah: app waxaa loogu talagalay si ay u qoraan audio dhex kaarka codka computer. Sidaas darteed haddii aad ku sii song Rhapsody sami ah ku cayaaro xilliga duubo, waxa aad ka heli kartaa tayada asalka audio.
3 Transfer Rhapsody in Lugood
Taga laybareeriga this app ee si loo muujiyo gabaygii Rhapsody duubay, ka dibna riix "Add to Lugood" badhanka hoose ee interface ugu weyn. Muddo ka dib, Lugood aad si toos ah u bilaabi doonto, taas oo muujinaysa song Rhapsody ka indhihiinna hortooda. Haddaba, haddii aad doonaysid inaad sii si aad u hagaagsan in aad iPod u madadaalada on go ah, oo kaliya ka hor tago!
Fiiro gaar ah: Si aad u ogaato halka ay ku heeso Rhapsody ku kaydsan yihiin your computer, kaliya dooro heeso iyo iyaga xaq-riix si aad u doorato Open ee Folder. Ka dib markii in, waxa kale oo aad gacanta heesahaaga Lugood wareejin karaan doorataa "File"> "Add Folder inay Library".